Maitiro ekuteerera kumimhanzi pane smart watches (Android, Apple uye nevamwe), Emulator.online ▷ 🥇
Paunenge uchifunga kutenga smartwatch, iwe unofanirwa zvakare kuongorora iyo mashandiro maererano nemimhanzi yekutamba- Ichangoshanda chete senge rudzi rweremote control kune yako smartphone kana ichave ichikwanisa mimhanzi yerwizi uye enzanisa nziyo kuti ugone kuzviteerera chero kupi?
Nayo akawanda akasiyana emumhanzi mafomu uye mapuratifomu ekushambadzira anowanikwa pamusika, mhinduro kumubvunzo uyu inogona kunge iri nyore kupfuura zvaungafunge, kunyanya nekuti hazvigoneke kushandisa sevhisi yakasarudzika yemimhanzi ine Hardware yakaiswa mune smartwatch. Tichaona, pakati pezvimwe zvinhu, mundima dzinotevera idzo, muchokwadi, rutsigiro rwakanakisa rwekutamba mimhanzi isingabvumirwe harubve kumawatch akangwara akagadzirwa neApple neGoogle.
Hezvino zvese zvaunoda kuti uzive kugona kwema smart watches kuridza mimhanzi zvese kubva kufoni yako uye zvakazvimiririra.
VERENGA ZVIMWE: Best smartwatches: Android, Apple uye nevamwe
Semutungamiri wemusika zvakare muma smartwatches, hazvishamise kuti iyoApple watch ipa mushandisi sarudzo dzakanakisisa dzekuteerera kumimhanzi uye mamwe marudzi eodhiyo; Apple Music Muchokwadi, ndicho chisarudzo chiri pachena kwazvo: iyo app inoita kuti iwe udzore mimhanzi inoridzwa pafoni yako zvakananga kubva pachiuno chako, kana kuendesa nziyo zvakananga kuApple Watch nekuiteerera kuburikidza nemahedhifoni. MAKARALI USB.
Nokunyorera kuApple Music, unogona kuifambisa rwiyo rwese mukatalog kana kunzwa zvese zvakatengwa nedigital uye kuunzwa pane smartwatch.
Kana masevhisi acho achienderana newachi yakasarudzwa, iyo mimhanzi matangi anogona kuyerera akananga kuApple Watch kuburikidza Wifi O LTE; Zvakare, kana iwe uri kure neinternet kubatana uye uchida kusiya foni yako kumba, unogona kuyananisa nziyo paApple Watch pamberi nekuenda Wachi yangu iripo muApple Watch app pane yako smartphone, wobva wapinda mumhanzi mi Wedzera mimhanzi. Kubvumirana kunongoshanda chete apo iyoApple watch ndiye anotarisira.
zvakare Spotify ine app yakatsaurirwa yeApple watch Inogona kushandiswa kutenderera marimba emimhanzi yakananga kune chiuno chako kana kudzora kutamba pane chimwe chigadzirwa. Uyezve, nekuda kwekuvandudzwa kwazvino, ikozvino inoshanda paWi-Fi uye nharembozha zvakare, ichikubvumidza kuti ubude usina foni yako.
Nekudaro, wachi yekubatanidza dhata sosi inodikanwa uye hazvisati zvichikwanisika kuyananisa zvinyorwa zvekutamba newachi yekuteerera kwekunze.
Ikozve kune app, Mimhanzi ye Youtube, yakatsaurirwa kuApple Watch, asi yakangoshandiswa kuongorora raibhurari yako yemumhanzi uye kudzora kutamba pane mamwe madhivha. Mabasa akafanana anogona kuwanikwa muapp Deezer naApple Watc.
Google Wear inoshanda sisitimu
Iyo smartwatch chikuva che Google hausati washandisa rutsigiro ruzere rwe Mimhanzi ye Youtube izvo, tichifunga chokwadi chekuti Google Play Music yakabviswa, zvinoshamisa kwazvo. Nekudaro, izvo zvinokwanisika kushandisa Shandisa OS kudzora mabasa akakosha e Mimhanzi ye Youtube pane yako smartphone.
Izvo zvataurwa pamusoro zvinoshanda kune angangoita ese masevhisi masevhisi - hapana app Shandisa OS yakatsaurirwa kumasevhisi anopiwa, semuenzaniso, yeApple Watch, saka hapana kuenderana playlist.
Kudzoreredza kudzora kunoonekwa pane yako smartwatch nguva yega yega kifaa Android inotamba zvemultimedia zvemukati zvese kuburikidza nekushandisa uye kuburikidza nepodcast player, asi kunze kwekutanga uye kumisa kutamba, hapana zvakawanda zvaungaite uye zvicharamba zvichidikanwa kuti ugare uine smartphone yako newe.
Iyo yega sevhisi sevhisi ine app inoenderana ne Shandisa OS es Spotify Kunyangwe iyo isingape zvinhu zvakawanda zvimwe kunze kwezvaunowana kuburikidza neyakajairika kusangana kwe Android game Shandisa OS: Unogona kuwedzera nziyo kuraibhurari yako yemumhanzi kubva pawachi yako uye chinja pakati pemidziyo yekutamba, asi haugone kumhanyisa mimhanzi yakanangana newachi yako, uye haugone kuyananisa makwara ekuteerera kwekunze.
Kuridza nziyo pane smart watch Shandisa OS pasina zvakare kuda foni, iyoSarudzo iri nani iko kushanda NavMusic iyo inopa yemahara nguva yekuedzwa mushure meizvozvo iwe unobhadhara: icho chinhu chidiki chishandiso chinoenderana nekutamisirwa kwemafaira emuno pawachi yako, nokudaro uchiwana mimhanzi yaunoda mumadhijitari fomati.
Fitbit, Samsung uye Garmin
Bhawa rega rega re Fitbit su Versa Lite inokutendera iwe kudzora mimhanzi uchitamba pane iyo smartphone yakabatana nayo, kuburikidza chero application sarudza kushandisa. Pane wachi kunze kweVersa Lite uye iyo nyowani Sense uye Versa 3, yakanyanya kutenderedzwa kumasevhisi emakore, unogona kuyananisa iwo madhijitari maturu akawanikwa nefoni yako kuburikidza nekushandisa Fitbit Unganidzo.
Zvakare mune iyi kesi Spotify ipa chikumbiro chakakosha kumawadhi akangwara Fitbit, asi kamwe zvakare zvinongokutendera iwe kudzora kutamba pane mamwe majaira: muchokwadi, hazvigoneke kuyananisa playlists neiyo wachi. Izvo zvinoshandiswa zvinokutendera kuti uite izvi, pane chero chishandiso. kunze kweVersa Lite, Ndiri Deezer mi Pandora. Kuda, saka, kuti unzwe mimhanzi yake mu Fitbit Pasina kuti foni yako ibatsire, unofanirwa kushandisa imwe yeaya masevhisi ekushambadzira kana kuteedzera emumhanzi mafaira, sezvakatsanangurwa pamusoro.
Nezve akateedzana Samsung Galaxy Tarisa, kutanga iko kushanda mumhanzi cherekedza kuti zvinokwanisika kuchinjika kubva kudzora mimhanzi inoridza pafoni kuenda kune iyo yewachi pachayo: kuteerera mimhanzi isingaenderane, unogona kuyananisa matraki edhijitari pane smartwatch kana kumisikidza iyo app Spotify yakatsaurirwa uye mushanduro Zvakanaka inokutendera kuti uenzanise playlists pane smart wachi.
Chekupedzisira, hwakawanda hwakawanda hwemawadhi akangwara Garmin ine mimhanzi yekutamba sarudzo senge idzo Samsung: Unogona kushandisa iwachi idzi kudzora kutamba kubva kumazhinji mafomu ekushandisa pafoni yako kana kutamba mimhanzi yedhijitari inoenderana kuburikidza nekombuta yako Garmin Unganidza, Kukutendera kuti usiye foni yako kumba.
Iyo yega sevhisi sevhisi inoenderana neyekuzvarwa kunyorera kweanopfeka zvakafanana Spotify uye, semumidziyo Samsung, vanyoreri ku Spotify Premium vanogona kuyananisa zvinyorwa zvekunyorera kuGarmin mudziyo kuti uvateerere chero kupi.
VERENGA ZVIMWE: Ndeipi smartwatch yekutenga muna 2021